Sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5T nambaran'i OnePlus | Androidsis
Ny roa herinandro lasa izay dia nahare olona marobe isika tsaho momba ny finday finday vaovao OnePlus. Araka ny fantatrao, ny marika dia handefa ny OnePlus 5T. Fampivoarana vaovao an'ny avo lenta izay natombok'izy ireo tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity. Fantatra tsikelikely ny antsipiriany bebe kokoa momba ity fitaovana ity. Raha ny marina, andro vitsivitsy lasa izay ny famolavolana izany dia voamarina.
Amin'ny faran'ity volana ity dia ho afaka hahafantatra an'ity telefaona ity isika. ny Ny 5 Novambra no hanaovana ny fanolorana ofisialy ny OnePlus 20T. Ka ao anatin'ny roa herinandro mahery dia ho fantatsika ity finday avo lenta vaovao ity avy amin'ny marika sinoa. Mandra-pahatongan'izany dia mbola maro ny lafiny haseho. Saingy efa nanambara zavatra nandrasantsika ny OnePlus. Efa fantatsika ny sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5T.
La Ny marika sinoa dia nizara tamin'ny tambajotra sosialy ny sary ofisialy voalohany amin'ny findainy vaovao. Amin'izany no ahafahantsika mahafantatra ny famolavolana ilay fitaovana. Ankoatra ny fahitana zavatra tena mahaliana noho io sary ofisialy voalohany io. Inona no azontsika antenaina amin'ity finday ity?
Iray amin'ireo vitsy ary fanovana lehibe an'ny OnePlus 5T raha oharina amin'ny kinova taloha dia ny lafiny ara-batana. Nandritra ny andro vitsivitsy dia efa fantatsika fa ny OnePlus dia hanatevin-daharana ny lamaody an'ny efijery tsy misy frame. Ka hanana telefaona ny efijery misy ratio 18: 9 (Toy ilay ao amin'ny Galaxy S8). Izany dia miteraka telefaona misy efijery lehibe kokoa.
La efijery vaovao dia 6 santimetatra, na dia ataony ao amin'ny vatan'ny telefaona 5,5 mitovy. Ka ny haben'ny efijery nitombo dia tsy nahatonga ny telefaona ho lehibe kokoa. Asa manan-danja amin'ny marika, saingy azo antoka fa manome lanja tsara ny mpanjifa.
OnePlus dia mamorona fientanam-po be amin'ny fanombohana ny OnePlus 5T. Tian'ilay orinasa handeha tsara ny zava-drehetra ary hahazo varotra tsara amin'ity fararano ity amin'ny alàlan'ity telefaona vaovao ity. Mandritra izay herinandro izay dia ho fantatsika ny antsipiriany rehetra momba ity finday ity. Ahoana ny hevitrao momba ny telefaona OnePlus vaovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » OnePlus dia mamoaka ny sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5T
Tsy tao aoriany ilay sensor momba ny dian-tànana?
Azo atao izao ny manafoana ny bokotra Bixby amin'ny Galaxy S8 sy Note 8
OPPO R11S sy R11S Plus: Ireo finday avo lenta roa vaovao an'ny OPPO